Wikipedia:Maqaallo Xul Ah - Gpedia, Your Encyclopedia
Gpedia:Maqaallo Xul Ah
Maqaalada Xulka Ah ee Gpedia
Maqaalada xulka waa kuwa ay aaminsanyihiin wax bedeleyaasha in ay uqoranyihiin si wanaagsan. inta aan halkaan lagu soo darin, waxaa la doonayaa in lagu daro Liiska maqaalada sharaxan iyadoo halkaas lagu hubin doono dhenka sugnaanta, dhexdhexaad nimda iyo Habka maqaalada Xulka Ah. Hoos liiska magacyada maqaalada la galiyey ee maqaalada xulka ah insaykolobedhiya xorta ah ee Gpedia, heerka hadba laamaha ayaad ka soo xulan doontaa.
Bogga hore waxaa la soo galiyaa laamin kasta hal maqaal kaas oo ka mid ah 15 maqaal ee guud ahaan ku jirta 5,758 maqaal kaasoo udhigma 1 ! maqaal dhammaan 383Kiiba. Hadiiba ay jiraan maqaallo taasoo aad isleedahay kuma haboona in lagu soo daro maqaallada xulka ah, ama waxbaa laga bedeley taasoo ka dhigaysa mid aan ku habooneen in ay ka mid noqoto liiskaan, waxaad gelin kartaa adigoo soo jeediya habayn ama aad ka saarto habaynta maqaalada xulka ah. waxay mutaysan karaan qaybo ka mid ah maqaalada aan noqon karin si ay u ahaato maqaal xul ah in lagu daro Maqaal cusub oo kale.
waxaa lagu kaabayaa xidig yer ( ) Xagasha halkeeda sare ee midig waxay ku tusaysaa in maqaalkaan uu yahay maqaal xul ah.
Cilmiga bulshada · Suugaan · Juquraafi · Taariikh · Afafka · Sharci · Ganacsi · Cilminafsi · Waxbarashada iyo Barbaarinta · Falsafad · Xisaab · Bayoloji · Kimisteri · Fiisikis · Caafimaadka
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Gpedia:Maqaallo_Xul_Ah&oldid=150489"
Ka Kooban Gpedia Xul